Wasiirk Boostada iyo Isgaarsiinta Soomaaliya oo Madax Kula Kulmay Jabuuti – Radio Daljir
Agoosto 16, 2017 8:03 b 0
Wafdiga Wasaaradda Boostada, Isgaarsiinta iyo Tiknolojoyadda dalka Soomaaliya oo uu hogaaminayo Wasiirka Wasaaradda Mudane Eng. Cabdi Cashur Xasan oo booqasho shaqo ku jooga dalka Jabuuti ayaa waxa ay kulamo kala duwan la qaateen Masuuliyiinta Wasaaradda Warfaafinta, Boostada iyo Isgaarsiinta dalka Jabuuti.
kulamadan ayaa waxaa si gooni ah looga wadahadlay arrimaha xiriirka Iskaashiga ee dhinaca hergelinta Heshiiska Boostada Jabuuti “La Poste de Djibouti” iyo iskaashiga dhinaca horumarinta Isgaarsiinta, Sidoo kale Xubanaha wafdiga ayaa waxa ay kormeer ku tageen Xarumaha Shirkada Djibouti Telecom iyo shaldhiga xargaha fiber optic-ga dalka Jabuuti.
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta ,Boostada iyo Isgaarsiinta dalka Jabuuti Mudane Mudane Cabdi Youssouf Sougueh ayaa waxa uu sheegay in ay doonayaan in ay wada yeeshaan labada dal ee Soomaaliya iyo Jabuuti xiriir dhow ee dhinaca iskaashiga isgaarsiinta iyo Boostada.
Wasiirka Wasaaradda Boostada, Isgaarsiinta iyo Tiknolojiyadda Mudane Cabdi Cashur Xasan ayaa ammaanay horumarka ballaaran ee Dowladda Jabuuti ka samaysay dhinaca horumarinta adeegyada la xiriira xargaha Fiber optic-ga isaga oo sheegay in ay wax badan ka faa’iideysan doonaan khibradda dowladda Jabuuti.
RW Ku-xigeenkii Ahaana Wasiirkii Arrimaha Dibadda Hore ee Soomaaliya oo Geeriyoodey